Ukwamkelwa kweZikolo zoNyango zaseCaribbean: Kutheni le nto ibalulekile i-2022
Septemba 9, 2021 U-Okpara Francis
Ukwamkelwa kweZikolo zonyango zaseCaribbean: Kutheni le nto ibalulekile
Iziqithi zeCaribbean zibonise ukukhula okumangalisayo kwinkqubo yezemfundo ngokubhekisele kakhulu kwimfundo yezonyango.
Iiyunivesithi zamabanga aphakamileyo kunye nezikolo zonyango ziyavela kwiCaribbean ezibonelela ngemfundo ethelekiswa nomgangatho wemfundo kumazwe akhokelayo kwizifundo. Nangona kunjalo, abafundi abanqwenela ukulandela ikhondo lezonyango kufuneka bajonge ukuvunywa ngaphambi kokufaka isicelo kwisikolo sezonyango.
The Izikolo zonyango ezaziwayo zeCaribbean ziya zithandwa kuba banikezela abafaki-zicelo abaninzi amathuba okufunda iinkqubo zonyango kwaye banenqanaba eliphezulu lokwamkelwa. Xa isikolo sezonyango samkelwe, umzimba wezifundo uhlangabezana nemigangatho yolwakhiwo kunye nokusebenza kwemfundo yezonyango yommandla othile.
Nangona kunjalo, iziko lonyango kufuneka lifumane ukuvunywa kwigunya lommandla okanye elamazwe aphesheya. Ngale nto, amaziko onyango angabonisa ukuba inkqubo yabo yemfundo ihlangabezene nemigangatho yesizwe yezonyango ekhokelela kwisidanga sonyango emva kokugqitywa kwenkqubo.
Kwizikolo zonyango zaseCaribbean, iiarhente ezintathu ezigunyazisayo zinendawo ekubonwa ngayo i-WFME enokuthi ibonelele ngeziko lezonyango.
Abafundi abafuna inkqubo ye-MD kwizikolo zeCaribbean med kufuneka bajonge ukuvunywa yiKhomishini yoQinisekiso kwiKholeji yezoNyango (i-ACCM) yokuqinisekisa ukuba ikholeji ingcono ukulandela ikhosi yezonyango.
Kwizikolo zonyango zaseCaribbean, iKomiti yeSizwe yezeMfundo yaNgaphandle yezeMpilo kunye nokuVunywa (i-NCFMEA) igqibe kwelokuba umgangatho wokuvunywa kwe-ACCM ulingana nokuvunywa kwezikolo zonyango zamazwe aphambili kwezemfundo.
Nangona kunjalo, kwizikolo zonyango oluphezulu kwiziqithi zeCaribbean ziyafana neemfuno zesikolo sezonyango sase-US ukubonelela ngemfundo esemgangathweni kwabo bafuna unyango.
Inkqubo ye-MD yeyunivesithi ephezulu yezonyango kwiziqithi zeCaribbean ilandela iKomiti yoNxibelelwano yeMfundo yezoNyango (I-LCME) imodeli. Lo mzimba uvuma iinkqubo zonyango e-US ke, abafundi abalandela inkqubo yezonyango kwizikolo zonyango zaseCaribbean eziphezulu bafumana ngempumelelo indawo yokuhlala kwilizwe labo.
Nantsi ukubaluleka kokuvunywa kwisikolo sezonyango
Ukuqinisekiswa kuqinisekisa umgangatho wemfundo yezonyango kwaye kudala indawo yokuphucula ngakumbi.
Abafundi abaphishekela ikhosi yezonyango kwisikolo sezonyango esivunyiweyo bafumana ukwamkelwa kwilizwe liphela ngenqanaba elamkelwe kwilizwe liphela.
Abathweswe izidanga kwizikolo zonyango eziqinisekisiweyo banokufumana indawo yokuhlala kumazwe afana ne-US ne Canada.
Iiyunivesithi zonyango ezivunyiweyo ze-ACCM ziqinisekisa abafundi, ubugcisa kwezonyango, uluntu, kunye nabaphumeleleyo ukuba inkqubo yezonyango ebonelela ngeziqinisekiso zonyango iyahlangabezana nemigangatho yesizwe neyamazwe aphesheya yomgangatho wemfundo.
Ukuqinisekiswa kwesikolo sezonyango bekusoloko kuyinto exhalabisayo kubafundi abanqwenela ukumisela indawo yokuhlala emva kokuphumelela kunye nokufumana iphepha-mvume lokuziqhelanisa.
Ngokulandela inkqubo yonyango evela kwindawo eqinisekisiweyo Isikolo sezonyango eCaribbean, ungaqhelisela naphi na e-US nase Canada.
Umsebenzi wezonyango ngowona msebenzi unomvuzo, kwaye imfuno ekhulayo yoogqirha kunye noogqirha kungenxa yendima yabo yokuxhasa amaziko ezempilo.
Ukulandela inkqubo yezonyango eyunivesithi yaseCaribbean kunokunyusa umgangatho wokufumana ikhondo lomsebenzi ngokufumana ithuba lokufunda kwizikolo zonyango eziphezulu apha. Ke, khetha isikolo sezonyango esinokukulungiselela umsebenzi owonwabisayo kwezamayeza. Sayina ungene ngoku ukuze wazi ngakumbi ngezikolo zonyango eziqinisekisiweyo zakwiziqithi zeCaribbean!
Post Previous:6 Ithemba eliPhezulu leMisebenzi yoKhuseleko lweCyber
Okulandelayo Post:Ngaba ulawulo lweshishini lwamanye amazwe luyafuneka?